सडकको करमा डसिंदै जनता - Sarangkot NewsSarangkot News
सडकको करमा डसिंदै जनता
29 August, 2018 3:06 am
कृषि, पशुपंक्षी ढुवा नीमा मनोमानी कर
मुलुकमा संघियता कार्यान्वयनमा आए पछि जनताले राहत भन्दा आहत पाइरहेका छन्। संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा अहिले तीन तहको सरकार रहेको छ । तीनै तहका सरकारले विभिन्न वहानामा जनताको ढाड सेक्ने गरि कर शुल्क उठाएर हैरान खेलाइरहेका छन् । कृषि प्रधान मुलुकका जनताहरु सरकारवाटै प्रताडित छन् । खसी, वोका, कुखुरा, तरकारी ढुवानीमा समेत चर्को कर लगाइएको छ ।
पालिका सरकारले आफ्नो कर्तव्य र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व नै भुलेर मनोमानी कर उठाउदै आएका छन् । ६५३ वटा स्वायत्त पालिकाहरुले उठाएका कर दै दस्तुरहरु विकासमा भन्दा विलासितामा खर्च हुने गरेको पाइएको छ । महंगा गाडी तथा आकर्षक तलव सुविधामा जनतावाट उठाइएका कर खर्च हुदै आएको छ । जनप्रतिनिधिहरुको कार्यसैली सेवामुखी भन्दा साशक मुखी वन्दै गएको छ । जनताले जनप्रतिवाट पिडित हुनु परेको छ। वलपूर्वक गुण्डागर्दी शैलीमा कर असुली गरिएको छ । यस तर्फ कहाँ गुनासो गर्ने ? कसले गुनासो सुन्ने? गुनासो सुन्ने निकायवाटै अन्याय हुन्छ भने न्याय कसले दिने?
राष्ट्रिय राजमार्ग मै स्थानीय कर उठाइन्छ
पृथ्वी राजमार्ग हुदै पोखरा आउने कृषिजन्य उत्पादन, पशु चौपाया,दोपाया भेडा वाख्रा ढुवानीका स
वारी साधनबाट मनोमानी ढंगवाट कर उठाइएको छ । आवु खैरहनी गाउँ पालिकाले वि.नं. २७६९ वाट मिति २०७५ भाद्र ११ गते चौपाया, दोपाया शिर्षकबाट निकासी कर उठाएको छ । दाङबाट पोखरा आएको उक्त गाडीले राजमार्ग प्रयोग गरे वापत कतिवटा स्थानिय तहलाई कर तिर्ने ? विलमा गाउँ पालिका निकासी कर उल्लेख छ तर कर राष्ट्रिय राजमार्गमा वसेर उठाइएको छ त्यो पनि अर्कै प्रदेशवाट आएको वस्तुमा कर उठाइएको छ ।
राष्ट्रिय राजमार्गमै अर्को कर उठाइएको रसिद सराङकोटलाई प्राप्त भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जा २०७३ को छाप लगाएर देउराली कन्स्ट्रक्सन वाङसिङ–२ सेपत स्याङ्जाले सिद्धार्थ राजमार्गमा आएर कर उठाएको छ । कुखुरा शिर्षकमा चार सय कुखुरावाट ४५२ रुपैया कर उठाइएको छ । गाउँपालिका घोषणा हुनु भन्दा अगाडिको विल काटेर उठाइएको कर वैध हो कि अवैध भन्ने विषयमा शंका उव्जिएको छ .
। २०७३ सलाको समन्वय समितिको वि.नं. १४१६ सम्म कति कर उठ्यो कति रकम कहाँ जम्मा भयो भन्ने छानविन हुनु जरुरी छ ।
निकासी करको नाउँमा राष्ट्रिय राजमार्गमा उठाइने कृषि तथा पशुं पक्षी करको वैधानिक वारे छानविन गरिनुपर्ने आवाज उठेको छ । प्रत्येक स्थानिय निकायले कर उठाउने हो भने हेटौडको २० रुपैया किलो तरकारी कालीमाटी पुग्दा ८० रुपैया पुग्नुलाई अनर्थ मान्न पर्दैन । राजमार्गका विचौलियाले कर ठोक्न थालेपछि महंगीले आकास हुने अवस्था आएको छ ।
आँधिखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिर बहादुर थापाले राजमार्गमा कर उठाएको सगर्व स्वीकार गरे । उनले भने पहिलैवाट उठाइरहेका छौ संघिय सरकारले केहि वोलेको छैन त्यहि भएर उठाएको थापाले भने ।
स्थानिय तहले राजमार्गले कमाइ खाने अखडा वनाउदै आएका छन् । राज्यले एकद्धार प्रणाली मार्फत् कर उठाउने पद्धतिको विकास नगरे सम्म स्थानिय तहको पासोमा सर्वसाधारणले मनोमानी कर असुलीको कर कर वाट मुक्ति पाउन कठिन छ ।